ओली अनुपस्थित नेकपाको बैठकमा के के निर्णय भए ? – News Portal of Global Nepali
ओली अनुपस्थित नेकपाको बैठकमा के के निर्णय भए ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सचिवालयको बैठक अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराहीमा सपन्न बैठकले स्वास्थ्योपचारको सिलसिलामा सिंगापुरमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभको प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
बैठकले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु बारे व्यक्तिगत विषयमा कुनै कुरा उठाउनु परेमा पार्टी भित्रै छलफलको बिषय बनाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिगत बिषयहरु सार्वजनिक रुपमा राखेमा स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आवश्यक कारबाही गरिने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी पार्टी एकीकरण प्रक्रिया सामेल हुनुभएका ४ जनालाई बैठकले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेको छ । यसरी मनोनित हुनुहुने कमरेडहरुमा देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, पदम राई र किरण राई रहनुभएको छ । त्यसैगरी बैठकले निम्न नेताको जिम्मेवारी केही हेरफेर सहित तोकेको छ ।